ဘီယာဘာ ကြောင့်သောက်သင့် တာလဲ – Gentleman Magazine
ဘီယာသောက်တက်တဲ့ လူတွေ အတွက်တော့သီတင်းကောင်းပါ။ ဘီယာမသောက်တက်သေး တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အကြောင်းပြချက်ရတယ်လေ။ တရုတ်သိပ္ဗံပညာရှင်တွေက ဘီယာဟာ သင့်ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ရှာဖွေတွေ့ရှိလို်က်ပါပြီ။
အဓိက ဘီယာမှာပါတဲ့ Xanthohumol ဆိုတာက ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောနဲ့ ပက်သက်တဲ့ မေ့တက်တဲ့ Alzheimer ရောဂါ လိုမျိုးတွေကို ကာကွယ်နို်င်ပါတယ်တဲ့။ ကြွက်တွေမှာ စမ်းသပ်တွေ့ရှိထားတာပါ။ လူတွေမှာတော့ သေချာမစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်ဘာကြောင့် တိကျတဲ့အဖြေကို စောင့်နေမှာလဲ။ လူ့ဘဝက ခဏလေးပါ။ အသက်ရှိတုန်းလေး ရောဂါကင်းဝေးစေဖို့ အားလုံးဘီယာသောက်ကြစို့
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး . ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့…
ဘီယာသောကျတကျတဲ့ လူတှေ အတှကျတော့သီတငျးကောငျးပါ။ ဘီယာမသောကျတကျသေး တဲ့သူတှအေတှကျကတော့ အကွောငျးပွခကျြရတယျလေ။ တရုတျသိပ်ဗံပညာရှငျတှကေ ဘီယာဟာ သငျ့ဦးနှောကျကနျြးမာရေးအတှကျကောငျးတယျဆိုတာ ရှာဖှတှေရှေိ့လျိုကျပါပွီ။
အဓိက ဘီယာမှာပါတဲ့ Xanthohumol ဆိုတာက ဦးနှောကျနှငျ့ အာရုံကွောနဲ့ ပကျသကျတဲ့ မတေ့ကျတဲ့ Alzheimer ရောဂါ လိုမြိုးတှကေို ကာကှယျနျိုငျပါတယျတဲ့။ ကွှကျတှမှော စမျးသပျတှရှေိ့ထားတာပါ။ လူတှမှောတော့ သခြောမစမျးကွညျ့ရသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျဘာကွောငျ့ တိကတြဲ့အဖွကေို စောငျ့နမှောလဲ။ လူ့ဘဝက ခဏလေးပါ။ အသကျရှိတုနျးလေး ရောဂါကငျးဝေးစဖေို့ အားလုံးဘီယာသောကျကွစို့
မိနျးကလေးတိုငျး တောငျ့တပွီး . ယောကျြားလေးတိုငျး အားကစြဖေို့…
Previous: လိင်တံ ကြီး/ရှည် အောင်လုပ်လို့ရလား
Next: အိပ်စက် အနားယူသင့်တဲ့ ကြာချိန်